प्रचण्डसँग ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्नुभएछ, अब गम्भीर संकट आयो : खनाल - हाम्रो देश
प्रचण्डसँग ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्नुभएछ, अब गम्भीर संकट आयो : खनाल
१६ कार्तिक २०७७
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवादले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल यतिवेला वारपारको अवस्थामा पुगेका छन् ।
हिजो मात्रै दाहालले १२ दिनपछि ओलीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले ‘अब सँगै जान सकिँदैन्, अलग अलग जाऔं’ भनेर आफूसँग भनेको दाहालले आज सचिवालयका ६ जना बहुमत सदस्य सम्मिलित भेलामा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
उक्त भेलामा दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहभागी थिए ।
भेलामा सहभागी नेता खनालले दाहाल निवास खुमलटारामा भएको भेटवार्ताबारे रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँग यसरी सुनाए,‘हिजो अध्यक्ष कमरेड दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग भेट्नुभयो । उहाँले प्रचण्ड कमरेडसँग म पार्टीको निर्णय पनि मान्दिन् ।
तपाईले जे निर्णय गरे म त्यही मान्छु ? मलाई असहयोग गर्ने ? भनेर भन्नुभयो अरे । उहाँले अलग अलग भएर जाऔं भनेर पनि प्रस्ताव गर्नुभयो अरे । आज प्रचण्डजीले हामीलाई यही ब्रिफिङ गर्नुभयो । हामी छलफलमा छौं । पार्टीभित्र गम्भीर संकट आयो । कसरी एकता बचाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं ।’
ओलीले आफु हार्ने चुनाव गर्दैनन्ः बाबुराम भट्टराई
मतदाता नामावली अद्यावधिक अवसरको सदुपयोग गर्नुस्ः निर्वाचन आयोग